Kenyanka oo dalbanaya in joojiyo tacaddiyada ku saleeysan jinsiga | sowora
← Ilwad Elman is appointed Youth Ambassador for Somalia on Sexual Violence in Conflict
13 Somali men convicted of sex ring that involved abuse of teenage British girls →
Kenyanka oo dalbanaya in joojiyo tacaddiyada ku saleeysan jinsiga
Iyaga oo ka caraysan weerarro xiriir ah oo dhawaan lagu qaaday haween sababta oo ah dharka ay xirnaayeen, ayay Kenyanku waxay ku baaqayaan tallaabooyin kuwii hore ka adag oo lagu joojiyo tacaddiyada ka dhanka ah jinsiga, kuwaa oo si kasta oo ay jiraan dadaallo sharciyeed oo lagu ilaalinayo xuquuqda haweenka haddana wali aad u baahsan.
Dumar ka qayb-galay dibad-bixii looga soo horjeeday tacaddiyada ku salaysan jinsiga ee 17-kii November ka dhacay Nairobi. [Simon Maina/AFP]
Warbixin qaylo-dhaan ka wadda tacaddiyada ku salaysan jinsig
Wali waxa jira dareenno walwal oo ka taagan tacaddiyada jismi iyo nafsi, iyada hadda si caadi ah loo soo tabiyo xadgudubyada jinisyeed, sida ay sheegtay Xarunta Soo Kabashada Tacaddiyada Jinsiyeed (GVRC) ee Isbitaalka Haweenka Nairobi, taas oo taageero daawo isugu darta kuwa lagula kaco tacaddiyada sokeeye.
“Intii u dhaxaysay 2011-kii iyo 2012-kii, guud ahaan 2,532 xaaladood oo xadgudubyo aan jismi aheeyn iyo 422 kale oo xalaadood oo tacaddiyo jismi ah ayaa la diiwaan-galiyay,” ayay madaxa maamulka GVRC Alberta Wambua u sheegtay Sabahi.
Dhammaan xaaladaha tacaddiyada ku salaysan jinsiga ayaa 90% dhibanayaashu yihiin haween iyo gabdho, ayay tiri.
Xaruntu waxay diiwaangalisay 1,864 xaaladood oo la soo gudbiyay oo ah tacaddiyo loo gaystay haweenka intii u dhaxeeysay January iyo May ee sannadkan, kuwaas oo 84% ay ahaayeen xadgduub jinsi halka 16% ka ahaayeen tacaddiyo jismi.
Bisha January, xaruntu waxay rajaynaysaa in ay soo gudbiso warbixin buuxda oo xambaarsan dhammaan xaaladihii la diinwaangaliyay intii u dhaxeeysay 2013-kii yio 2014-kii. Wambua waxay sheegtay in lambarada cayriin ay illaa iyo cadda muujinayaan in ay aad u kordheen tacaddiyada jismi iyo jinsi ee lagula kaco dumarka.
“Tirooyinka aan soo saarnay kaliya waxa ay ka dhigan yihiin wax aad u yar oo ka mida tacaddiyada sida dhabta ah uga dhacaya ee laga diiwaangaliyay daafaha dalka, kuwaas oo muujinaya in haweenka iyo gabdhuhu u ku dhaco culayska ugu badan ee xanuunka iyo rafaadka,” ayay tiri, iyada oo intaa raacisay in ay waajib taha yin la laba laabo dadaallada ragga looga wacyigalinayo jariimada ay ku galayaan xadgudubyada caynkaas ah.
Dharkaygu waa dookayga
Wambua waxay sheegtay in naxdingaliyeen weerarradii xiririka ahaa ee dhawaan goobaha caamka loogu geeystay haweenka.
Dhacdooyin dhowr ah, ayaa lagu weeraray haween waxana si khasab ah loogu qaawiyay waddooyinka sababta oo ah sida ay u labisnaayeen, ayay tiri, taas oo ay tilmaan madoow oo muujinaysa in dhaqannada colaadeed ee ku salaysan jinsiga ay hadda ku jiraan weerar dadweyne ka sokoow tacaddiyadii guriga dhexdiisa iyo weerarrada jinsi.
Boqolaal dibad-baxayaal ah ayaa socod ku maray Nairobi 17-kii November si ay uga gilgishaan weerar lagu qaaday qof dumar ah oo ay qaawiyeen koox dad ah oo ku dooday in ay goonnadeedu ay aad ugu dhagganeeyd aadna u gaabnayd.
Maalintii dibad-baxa kadib, ayuu bilaysku xiray daraasiin rag ah oo lala xiriiriyay weerarro kuwaa la mida oo lagula kacay qof dumar ah oo ku sugneeyd astaan basas oo ku yaal Nairobi.
Ugu yaraan laba weerar oo kuwaa la mid ah ayaa laga soo weriyay Mombasa iyo Nairobi maalmihii dhawaa, waxana ka dhashay in la xiro ugu yaraan hal askari oo bilays ah.
Dhacdooyinkaas, oo dhacay maalin cad, ayaa caro dadwayne ka dhaliyay Nairobi.
Kenyaka ayaa maciinsday warbaahinta xiriirka bulshada si ay u dhalleeceeyaan tacaiyada jinsiyeed isla markaana ku baaqaan in la ixtiraamo xoriyadda haweenka iyaga oo isticmaalaya hashtag-ga #MyDressMyChoice (Dharkaygu waa dookhayga), iyada oo warbaahinta rasimiga ahna laga sameeyay doodo kulul.
Kadib markii ay socod ka bilaabeen Uhrur Park kuna tagaan astaanka basaska ee Embassava Sacco ee Waddada Accra, oo ah goob ka mida meelihii ay ka dhaceen weerarradu, ayay dibad-baxayaashu waxay u dhaqaaqeen xafiiska Isbatooraha Guud ee Bilayska Kenya David Kimaiyo si ay ugu dhiibaan bayaan saxiixan.
Dibad-baxayaasha ayaa markaa kadib socod ku aaday Maxkamadda Sare ee Kenya, halkaa oo Guddoomiyaha Maxkamadda Sare Willy Mutunga ku qaabilay una ballaanqaaday in uu bayaanka gaarsiin doono Golaha Qaranka ee Maamulka Garsoorka, kaasoo uu xubin ka yahay.
“Sharci-darrada aan aragnay ee ay dadkani ku weerarayaan haweenka waxa arrinka hor imanaysa dastuurka,” ayuu yiri Mutunga iyada oo sacab u garaacayaan kooxdu. “Raggaasi waxay ku ciyaarayaan magaca ragga kale.”
Dumarka oo dalbaya dammaanad-qaad
Dadkii ka soo qayb-galay dibad-baxa, oo ay soo agaasimeen kooxda Kilimani Mums, ayaa dhalleeceeyay weerarka waxayna ku boorriyeen xukuumadda in ay kuwii ka dambeeyay hor keenaan caddaaladda. Waxay sidoo kale ka dalbeen hoggaamiyayaasha siyaasadda in ay si cad u dhalleecayaan dhacdooyinkaas isla markaana ay dammanaad-qaad ka bixiyaan bed-qabka haweenka.
“Xaqiiqda ah in weerarkaas axmaqnimada ahi uu maalin cad ka dhaco astaan bas oo ku yaal waddo cagtu ku badan tahay oo ku taal caasimadda, saas oo ay tahayna ayan goobta joogin hal askari oo bilayska ah si ay u caawiyaan haweeneeyda jismiyan iyo nafsiyanba loogu tacaddiyay ayaa waxa ay dad badan badday in ayan jecleeysan xaaladda uu ku sugan yahay bilayskeennu,” ayay tiri Koki Gatabaki, oo ah 29-jir, rajanaysa in ay noqto jilaa.
Tacaddiyada caynkan ah waxay isku fuuqsanayaan guulihii ay Kenyanku ka gaareen hubinta in haweenku helaan xuquuq la siman tan ragga, ayay u sheegtay Sabahi. “Ayaan-darro, tani waxay u dhacday sababta oo ah in yar oo dambiyadaas gala oo aan ciqaab la kulmin.”
Dhacdooyinkii dhawaa ee isugu jiray dhibaateeynta iyo xadgudubka waxay reebayaan natiijo ka qoto dheer kuwii hore “bacdamaa ay ka tarjumayaan sharci-darro iyo isku dulqaad la’aanta ka jirta dalka,” ayuu yiri qareenka ka howlgabay maxkamadda sare Kariuki Muthe’ngi oo ah 65-jir.
Dastuurka Kenya iyo sharciga xuquuqaha waxay si cad u dammaanad-qaadayaan xuquuqda dumarka, ayuu yiri.
“Shuruucdu way adagyihiin laakiin fulinta ayaa jilicsan amaba aan jirin sababta oo ah waxa uu habac qoto-dheer ka jiraa hay’adaha fulinta sharciga oo waxay kaliya oo ay tallaabo qaadaan marka ay la kulmaan canaan aad loo adkeeysan karin kadib dibad-baxyada ama markay amar ka helaan mas’uuliyiinta dawladda,” ayuu u sheegay Sabahi.
“Hannaanka garsoorka dambiyada Kenya si fiican uguma qalabaysna in uu haweenka ka ilaaliyo tacaddiyada ku saleeysan jinsiga inkasta oo baralmaanku isbaddal ku sameeyay Sharciga Dambiyada Jinsi ee 2006 sababtuna tahay fulin la’aanta iyo maqnaanta hannaan la sococosho oo ay sameeyaan hay’adaha dawladeed ee uu arrinku khuseeyo sifo loo hubiyo in loo hoggaansamo sharciga iyo dastuurka,” ayuu yiri.
Baarayaasha iyo dambi soo oogayaasha bilayska ayaa sidoo kale waxa ka maqan tababarrada takhasus ee looga baahay in ay ka haystaan qodobada Sharika Dambiyada Jinsi, taas oo ah mid kamida arrimaha ugu muhiimsan ee ka qaybqaadanaya tirada aadka u heer sarreeysa ee dacwooyinka ay maxkamaduhu tuuraan marka la soo gudibyo, ayuu raaciyay.
Dacwooyinka tacaddiyada ku salayan jinsiga waa in ay kaliya soo oogaan qareenno khibrad leh oo ayan soo oogin kaliya dambi-oogayaasha bilayska, ayuu sheegay, isaga oo intaa raaciyay in bilaysku uu xilligan dacwooyinkan ka soo oogo maxkamado hoose, taas oo sharraxaad ka bixinaysa sababta dacwado badan la isga tuuray tuhmanayaashiina loo beri-yeelay.
Madaxa Waaxda Baarista Dambiyada ee Nairobi Nicholas Kamwende ayaa u sheegay Sabahi in la dhisay kooxda bilayska ee “la-dagaallanka dhar ka dhigidda” si ay wax uga qabtaan kororka ku yimid weerarrada lagu qaado haweenka.
Waxa uu sheegay in isbatooraha guud ee bilayska uu xushay darsin haween ah in ay si qarsoodi ah uga shaqeeyaan astaannada basaska iyo goobaha kale ee caamka ah waxana la siiyay dhammaan wixii agab shaqada looga baahan yahay in ay shaqadooda ku gutaan.
Kamwende ayaa sidoo kale ku dhiirri-galiyay haweenka dhibaatadu ka soo gaadhay weerarrada caynkan oo kale ah in ay yimaadaan saldhigyada bilayska si ay dacwad u diiwaangaliyaan, taas oo gacan ka geeysan doonta baaritaannada iyo soo qabashada dambiilayaasha. Waxa uu sheegay in bilaysku uu macluumaad walba oo ay helaan u tixgalin doonaan si sir ah.
Hoggaamiyayaasha diinta oo hadlay
Kororka ku yimid tacaddiyada lagu hayo dumarka waa walwal weyn hoggaamiyayaasha diintuna waxa loo qaataa in ay u isku diyaariyaan wax ka qabashada dhibaatadaan, ayuu yiri Bishop Mark Kariuki, oo wadaad sare ka ah Kaniisadda Badbaadada ee Nairobi.
Kariuki waxa uu dhammaan Kenyanka ugu baaqay, isaga oo ka bilaabay hoggaamiyayaasha kaniisadda, in ay dhacdooyinkii dhawaa tacadiyada jinsiyeed u isicmaalaan niyad ay ku bilaabaan in kaniisadahooda uga hadalaan kuna istaajiyaan “fiditaanka la dhayalsaday ee tacaddiyada jinsi iyo xadgudubyada guriga.”
“Si ay bulshadu nabad ugu wada noolaato, xalka tacaddiyada sii kordhaya ee jinsiga waxa uu ku jiraa in ragga iyo wiilasha lala shaqeeyo oo laga dhigo shuraako wax ka gasha dagaalka lagula jiro balaayadan,” ayuu u sheegay Sabahi, isga oo intaa ku daray in hoggaamiyayaasha dawladda iyo diina ay ka wada shaqeeyaan sidii loo qaban lahaa olole lagula dagaallamayo xadgudubyada oo lagu beegsanayo ragga.
Wadaadka Murungi Igweta oo ka tirsan Kaniisadda Trinity Baptist ee Nairobi ayaa taa ku raacay, isaga oo sheegay in tacaddiyada ka dhanka ah dumarka “ay caqabad ku noqonayaan kaalinta ay ka qaataan horumarinta qaranka iyo wacnaanshaha qoysaskooda.”
Waxa uu sheegay in ay ayaan-darro ahayd in haweenka qaar ayan taageero ka helin kaniisadahooda markii ay isku dayeen furriin ama kala fogaasho ay ku sababeeyeen tacaddiyo jismi oo loo geeystay. “Xittaa arrinku waa uu ka sii dari karaa xaaladaha dhibanayaasha ay faquuqa kala kulmaan kaniisadahoosa sababtoo ah isla arrimahaas,” ayuu u sheegay Sabahi.
“Tacaddiyada ka dhanka ah haweenka waa in ay welwel qoto-dheer ku beertaa kaniisadda iyo culimadaba,” ayuu yiri.
Waa in bulshooyinkooda lagu fadeexeeyaa kuwa gala tacaddiyada ka dhanka ah haweenka isla markaana lagu ciqaabaa sharciga, ayuu yiri Mohamud Abdillahi, imaamka masjidka Amani ee Mombasa.
In kasta oo dharka aan munaasibka ahayn ay quudin karaan akhlaaq xumida, ayuu sheegay, haddana taasi ma aha wax lagu banneeysan karo tacaddiyada jismi, mana aha in dhibanayaasha lagu eedeeyo dambiga dhacay.
“Tacaddiyada ka dhanka ah haweenka waxay u jiraan sababta oo ah ragga ka tirsan bulshada ee gala tacaddiyadaas ayaan lagala xisaabtamin dambiyadooda,” ayuu u sheegay Sabahi, isaga oo ku baaqay ciqaab inta ka kulul iyo sharci fulin sidan ka fiican si ay u waabtaan.